Jumlada Jumlada C Cd soo saaraha iyo alaab -qeybiye | BWOO
Nooca Kordhinta Degdegga ah ee C ilaa C94 Isku -xiraha Hillaaca PD cable usb ee loogu talagalay taleefanka gacanta ee taxanaha ah ee iPhone 12
1. Nooca C ilaa C 94 isku xira
2. Waxay la jaanqaadi kartaa PD20W si dhakhso ah u dallacsiinta
3. Xidhiidhiyaha Nooca C ee la rogi karo, labada dhinacba ku xidh.
4. Jaakada TPE -ga ee u fiican deegaanka
5. La jaan qaadaya aaladaha karti u leh USB-C & iPhone (Macbook cusub, Chromebook Piexl)
Magaca badeecada: BWOO 20W PD cable USB
NOOCA USB: Usb-c ilaa Hillaac
Function: PD20W Taariikhda Cable ee PD Charger
1. Jilicsanaanta Taabashada: Weligaa ma dareemin fiilo sidan oo kale ah. Dhamaadka gel silica wuxuu dareemayaa si aad u jilicsan inta u dhexeysa farahaaga markaad ku xirto X193 PD cable USB aaladdaada.
2. Awood Xoog leh: Fiiladayada ugu jilicsan weligeed sidoo kale waa midda ugu adag. X193 cable usb PD wuxuu leeyahay 25,000-leexasho nololeed, in ka badan oo ku filan si uu u maareeyo walbahaarka iyo culeyska ku dallacaya socodka.
3. Laabi, Maroojin, Flex It: Waxay ku sii jirtaa tangle-la'aan xataa marka lagu rido boorso ama jeeb, ama lagu duubo xeedho la qaadan karo.
4. Badbaadada La Xaqiijiyay: MFi ayaa la xaqiijiyay inuu si aan kala sooc lahayn ula shaqeeyo dhammaan aaladahaaga Hillaac, oo ay ku jiraan iPhone 12 iyo iPad. Si badbaado leh ugu dallac aaladdaada xawaaraha ugu sarreeya ee suurtogalka ah marka lagu xiro korantada xawaaraha sare leh.
5. Waxa aad Hesho: X193 PD usb cable USB-C ilaa Cable Lightning, silig silikoon, hage soo dhaweyn, dammaanad-qaad la'aanteena 18-bilood ah, iyo adeeg macmiil oo saaxiibtinimo leh.
Iyada oo leh BWOO, qoyskayaga alaabada ayaa u oggolaanaya shirkadaha inay noqdaan kuwo la isku halleyn karo, dabacsan, oo faa'iido leh.
Shirkadaha sida Amazon, Walmart, iyo Verizon waxay adeegsadaan badeecadaha BWOO si ay u abuuraan kaalmo macmiil oo soo jiidasho leh, iyagoo la dhisaya daacadnimo joogto ah macaamiishooda.
Bilow waayo -aragnimada damaanad qaadka noloshaada maanta si aad wax badan uga ogaato faa'iidooyinka BWOO:
• Istaraatiijiyad sahayda qaybta oo dhan oo ku salaysan awoodda wax -soo -saarka oo xooggan iyo silsiladda sahayda oo dhammaystiran.
• Bixiyaha shatiga leh ee MFi oo ay oggolaatay APPLE.
• Bixi adeega OEM/ODM/OBM tan iyo 2003dii.
• 10-15 nooc oo cusub bil kasta.
• Kooxda naqshadeynta iyo Kooxda Iibka ayaa mar walba ku taageeray.
Q1: Sida loo xakameeyo tayada alaabta?
Waxaan mar walba xoogga saarnaa heerka tayada ayaa la hagaajiyay. Waxaa intaa dheer, mabda'a aan had iyo jeer ilaalino waa inaan siino macaamiisha tayo wanaagsan, qiimo ka wanaagsan iyo adeeg ka wanaagsan.
Q2: Ma bixin kartaa adeegga OEM/ODM?
Haa, waxaan ku shaqeynaa amarro la habeeyay.Taas oo macnaheedu yahay cabbirka, maaddada, tirada, naqshadeynta, xalka xirxirida, iwm, waxay ku xirnaan doontaa codsiyadaada, astaantaaduna waxay ku habboonaan doontaa alaabtaada.
Q3: Qaabka Maraakiibta iyo Waqtiga Maraakiibta?
1) Waqtiga dhoofintu waa qiyaastii hal bil waxay ku xiran tahay waddanka iyo degaanka.
2) Dekedda badda ilaa dekedda: qiyaastii 20-35 maalmood
3) Wakiil ay magacaabeen macaamiishu
Q4: Waa maxay MOQ ee wax soo saarkaaga?
MOQ waxay kuxirantahay shuruudahaaga midabka, cabbirka, maaddada iyo wixii la mid ah.
Q5: Aaway BWOO? Suuragal ma tahay inaad booqato warshaddaada?
BWOO waxay ku taal Liwan, Guangzhou City. Waa lagu soo dhaweynayaa inaad na soo booqato, macaamiil badan oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa na soo booqday.
Q6. Sida loo bixiyo?
Waxaan aqbalnaa Paypal, Visa, MasterCard, T/T iyo Western Union. Sidoo kale haddii aad rabto, waxaan ku samayn karnaa ganacsi Alibaba: Hubinta Ganacsiga & L/C labaduba waa OK 100% bixinta biilka qiimaha yar; 30% deebaaji iyo 70% kahor dhoofinta biilka qiimaha weyn.
Q7. Waa maxay dammaanadda alaabtaada?
Waxaan bixinnaa dammaanadda 12 bilood dhammaan alaabooyinka.
Hore: Nooca C Cable Charger
Cable USB -ga Apple
Fiilooyinka USB Custom
Kaydinta Degdegga ah ee Micro USB Cable
Cable Kaydinta USB -ga magnetic
Cable Kaydinta Micro USB
Nylon Cable USB -ga
Cable USB -ga Pd
Cable USB -ga la celin karo
Cable USB Xagasha Xaqa
Nooca C Cable USB
Usb C Si Aux Cable
Usb C Si Laydhka Laydhka
Usb C Si Cable Hillaac
Usb C Ku Xidh Cable USB
Cable xeedho USB
Cable Kaydinta USB
Cable Xogta USB
Usb -ka Wareejinta Xogta
Cable USB -ga jumlada ah
Dual USB Charger Phone